» “टिकटकमा रातारात,भाइरल भएका,सन्तोष पौडेल श्रीमतीसंग आएर, खोले यस्तो बास्तबिक ? के हो सत्यता ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)” “टिकटकमा रातारात,भाइरल भएका,सन्तोष पौडेल श्रीमतीसंग आएर, खोले यस्तो बास्तबिक ? के हो सत्यता ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)” – हाम्रो खबर
“टिकटकमा रातारात,भाइरल भएका,सन्तोष पौडेल श्रीमतीसंग आएर, खोले यस्तो बास्तबिक ? के हो सत्यता ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)”
हाम्रो खबर संबाद दाता 282 Views
“आजभोली सामाजिक सञ्जालका कारण केही ब्यक्तिहरु रातारात भाइरल भइरहेका छन् । त्यस्तै मध्य एक हुन् सन्तोष पौडेल । उनका टिकटक प्राय श्रीमतीसंग सम्बन्धित हुन्छन् । आफुलाई श्रीमती पीडितका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सन्तोष भन्छन् वास्तवमा म श्रीमती पीडित भने होइन । आफुले केही उदाहरण समाजमा देखेका कारण त्यसैलाई उतारेको बताउँछन् । उनले करिब १० वर्ष फिल्म क्षेत्रमा प्राविधिकका रुपमा काम गरेको अनुभव आफुसंग भएको बताउँछन् ।”
“उनले त्यो अनुभव आफुले टिकटकमा प्रयोग गरेको बताउँछन् । त्यसैले आफ्नो टिकटकमा पनि फिल्ममा कथा बोलेजस्तै बनाउने गरेको पनि बताउँछन् । टिकटक आउनु अघि म्युजिकलीमा पनि यसरी नै भिडियो बनाउने गर्थे । यद्धपी आफुसंग अभिनयको भने अनुभव भने नभएको बताउँछन् । उनले प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरेको भएपनि अभिनयसंग सम्बन्धितहरुसंग लामो समय संगत भएका कारण पनि सजिलै गर्न सकेको बताउँछन् ।”
“उनले टिकटक खाता बनाएको धेरै भएको छैन । अघिल्लो लकडाउन सुरु भएपछि मात्र उनले टिकटक बनाउन थालेको बताउँछन् । झण्डै डेढ बर्षको अवधिमा उनले बनाएका टिकटक भने निकै भाइरल भएका छन् । श्रीमतीलाई पनि टिकटकमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तर आफुलाई श्रीमती पीडितका रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । तर त्यसो होइन उनी भन्छन्, हामी संगै बस्न थालेको ३३ वर्ष भैसक्यो । त्यसैले हामीबीचमा निकै राम्रो समझदारी छ ।”
“उनीहरुको विवाह पनि अनौठो तरिकाले भएको थियो । त्यसवारे श्रीमतीले वास्तविकता खुलाउँदै भनिन्, चिया खाएर सक्दा सम्म मलाई जवाफ दिनुपर्छ भनेर चिया खान थाल्नुभयो । म तँलाई मन पराउँछु यो चिया खाँदा सम्म मलाई जवाफ चाहियो भनेपछि मैले पनि माया गर्छु भने म डराएरै भनेकी थिएँ ।”
“भारतद्वारा नेपालको विकासमा “पनि ठाडो अवरोध, दुष्ट दृष्टि नरोकिने भयो (भिडियो)”
तनहुँमा,टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा, खसेर १९ वर्षीया युवती बे,पत्ता”
“जनताको भावना हेरेर मात्र, एमालेले एमसीसीको विषयमा, निर्णय लिन्छ :-प्रदीप ज्ञवाली”
“माधवकुमार नेपाल,को पार्टीले अर्को चुनावमा पालिकाको वडा, सदस्यसमेत’ नजित्ने ओलिको ठोकुवा’
“१६ बर्षकि, बालिका,लाई गाउँपालिका अध्यक्ष, बनाइँदै”
“दुईजीब्रे अग्नि सापकोटा,लाई सभामुख,पदमा बस्ने अधिकार, छैन : कोमल वली”
“एम’सी’सी उपाध्यक्ष,फर्के’लगत्तै चिनियाँ,राजदूत’को दौडधुप, बिहानै पुगिन,नेताहरूको नि’वासमा”
( 2021, September 15th, Wednesday)